म अरुभन्दा महंगो कलाकार हुँ : प्रमोद खरेल | सु-सुचित नेपालको चित्र
प्रमोद खरेल–जसले सुगम संगितमा आफूलाई अब्बल गायक प्रमाणित गरिसकेका छन् । सांगितिक क्षेत्रमा करिब एक दशक संघर्षमै विताएपनि पछिल्लो समय एकपछि अर्को सुपरहिट गीत गाएका गायक खरेललाई देश तथा विदेशमा हुने सांगितिक कार्यक्रममा पुग्न भ्याईनभ्याई छ । उनले ‘मेरो दील छ पोखरामा’ गाइसकेपछि कहिल्यै पछाडि फर्किनुपरेन । आधुनिकसँगै चलचित्र,पप तथा राष्ट्रिय भाव बोकेकासहित सयौँ गीत गाइसकेका गायक खरेलले ७ वटा गीतिसंग्रह सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
स्टेजमा चढेपछि तपाईले छुटाउदै नछुटाउने गीतहरु कुन कुन हुन् ?
मैले स्टेजमा नछुटाइकन गाउने गीत आधादर्जन भन्दा बढि नै छन् । मैले गाएका गीतमध्ये ‘मेरो दील छ पोखरामा’, ‘झुम्कावाली’, भर्खरै रिलिज भएको ‘चल बतास चल’, फिल्मको डान्सिङ नम्बर ‘लागि लागि’, ‘डुबायो पापी मायाले’, ‘हंगामा भो’, ‘उसले जति माया तिमलाई मैले पनि दिन्थेँ होला’, ‘याद गर्न पनि’ म स्टेजमा नछुटाई गाउछु ।
दर्शकले सर्वाधिक मन पराउने तपाइको गीत कुन हो ?
धेरै नै छन् । स्टेजमा चढिसकेपछि दर्शकले प्राय मैले गाएका सबै गीतमा ‘वान्स मोर’ भनेकै हुन्छन् । झुम्कावाली र चल बतास चल त झन दुईपटकमात्र गाएर पनि पुग्दैन । एउटै कार्यक्रममा ३-४ पटकसम्म पनि एउटै गीत गाउन दर्शकले आग्रह गर्छन् ।
गीत गाउनकै लागि अहिलेसम्म कतिवटा देश पुग्नुभयो ?
अहिलेसम्म करिब ३० वटा देश गइसकेँ । त्यसमध्ये धेरै देशहरु पटक पट गइरहनुपर्छ । कतारमात्रै म आठौ पटक पुगिसकेको छु ।
महोत्सव तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि तपाई महंगो हुनुहुन्छ रे नि, हो ? एउटा कार्यक्रमवापत कति रकम लिनुहुन्छ ?
रेट त म बढि नै लिन्छु । महोत्सव तथा विभिन्न देशमा गीत गाउनका लागि पुग्दा म मेहेनत पनि धेरै गर्छु । स्टेज चढिसकेपछि म दर्शकको मन जित्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन । मार्केटमा चलिरहेको अन्य कलाकारको रेट भन्दा मेरो बढि नै छ ।
फुर्सदको समयमा आफ्नै गीत कत्तिको गुन्गुनाउनुहुन्छ ?
गुन्गुनाउछु । मैले गाएका सुपरहिट गितहरु त स्टेजमै गाइरहेकै हुन्छु । फुर्सदमा त्यस्ता गीत कमै गुन्गुनाउछु । क्रियटिभ काम गरिरहेको हुन्छु । नयाँ नयाँ गीत बढि गाउछु ।
त्यसबाहेक अरु कस्ता र क–कसको गीत सुन्नुहुन्छ ?
म नेपाली,हिन्दी,इंग्लिस सबै प्रकारका गीतहरु सुन्छु । नेपाली पुराना गीतहरु असाध्यै मन पर्छ । नारायण गोपाल,बच्चुकैलाश,भक्तराज आचार्य,प्रेमध्वज प्रधानका गीतहरु सुनिरहेको हुन्छु । ती बाहेक अन्य कलाकारको पुराना गीतहरु पनि बेला बेला सुनिरहेको हुन्छु ।
अर्काकै गीत गाउन भ्याईनभ्याई छ, तपाई आफैलाई चाहिँ शव्द र संगितमा कतिको रुची छ ?
छ नि । मेरो पहिलो रेकर्ड भएको गीत आफ्नै शव्द हो । मेरो आफ्नै शव्द,संगित र स्वरमा अहिले एल्वमको तयारी गर्दैछु ।
आफूले गाएका गीतमध्ये उत्कृष्ट तीन गीत छान्नुप-यो भने कुन कुन छान्नुहुन्छ ?
म छान्न सक्दिन । थुप्रै गीत स्रोताले मन पराएका छन् । मैले यो र त्यो गीत टप थ्री मा पर्छ भनेर कसरी भन्न सक्छु र ?
नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा तपाईको प्रतिस्पर्धी को को हुन् ?
मेरो प्रतिस्पर्धी म आफै हुँ । मेरा एकपछि अर्को गीत चर्चित भइरहेका छन् । एउटा गीत चर्चित भइसकेपछि अर्को गीतलाई कसरी पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने भन्ने चुनौति गायक स्वयमलाई नै हुन्छ । आफ्नै पुराना गीतभन्दा अझै राम्रो बनाउन सकेँभने मलाई पुग्छ । अरुसँग प्रतिस्पर्धा मैले गरिरहन आवश्यक ठान्दिन म ।
अरुको गीत गाउदैगर्दा कतिपय शव्दमा असन्तुष्टि रहन्न ?
त्यस्तो अवस्था पटक पटक आइरहन्छ । म आफै पनि मिलाउछु, गीतकारसँग सरसल्लाह गर्छु । एउटा गीत चर्चित हुन स्वरमात्र राम्रो भएर हुदैन । शव्द र संगितपनि राम्रो हुनुपर्छ ।
तपाई चर्चित हुनुभन्दा अघि सांगितिक क्षेत्रमा करिब १० बर्ष संघर्ष गर्नुभयो, त्यसबेला सांगितिक क्षेत्रप्रति दिक्क लागेन ?
फ्रस्टेट त म कहिल्यै हुदै भइँन । आज गीत गाएर भोलि नै पपुलर हुनुपर्छ भन्नै मान्यता मैले राखिन । कुनैपनि कलाकार,गायककारले दुःख भोग्नुपर्छ,संघर्ष गर्नुपर्छ । बजार बुझ्नुपर्छ,म्युजिकको अनुभव बुझ्नुपर्छ अनि संस्कारपनि बुझ्नुपर्छ । मैले जीवनमा संघर्ष गरेको छु । त्यसबेला एउटा गीत स्रोतासमक्ष पु-याउन निकै गाह्रो थियो । गीत गाउन पाउन,राम्रो मेलोडी पाउन धेरै गाह्रो थियो । आफ्नो स्थिति र आर्थिक अवस्था एकदमै कठिन थियो । मेरो जीवनमा पनि धेरै संघर्षका कथा छन् ।
आफ्नै रेकर्ड भएको स्वर र वास्तविक स्वर कत्तिको फरक महसुस गर्नुहुन्छ ?
फरक त भइहाल्छ । तर मलाई चाहिँ रेकर्डको भन्दा वास्तविक स्वर नै राम्रो लाग्छ ।
एकैदिन तपाईले कतिवटा सम्म गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ ?
एकैदिन मैले ६ वटा सम्म गीत रेकर्ड गरेको छु । कुनैदिन ५ वटा कुनैदिन ४ वटा त कुनैदिन रेकर्ड नहुने पनि हुन्छ ।
गीतमार्फत तपाईले जीवन बोल्नुभएको छ, मायाप्रेमको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ,तपाईको बुझाईमा जीवन र प्रेम के हो ?
जीवन भर्खर भर्खर बुझ्दैछु । जीन्दगी हामीले पाएको वरदान हो । भगवान बाट पाएको आशिर्वाद हो जीवन । यसलाई चलाउन प्रेम आवश्यक छ । म त विज्ञानको विद्यार्थी हुँ विज्ञानै भाषाले बुझ्छु । यौवन र उमेर प्राकृतिक कुरा हो । म नर्मल्ली लिन्छु यसलाई ।
आफ्ना शुभचिन्तकसँग कतिको समय बिताउनुहुन्छ ?
मेरा फ्यानहरु त धेरै छन् । आफन्त,सुभचिन्तकसँग भेटघाट त भइ नै हाल्छ । यद्यपी सांगितिक यात्रामै बढि व्यस्त रहनेभएकाले त्यतिधेरै समय दिन भ्याउदिन ।
एल्वम किनेर सुन्ने स्रोता त घटेका छन् नि, होइन ?
हैन । अहिले एल्वम बिक्री छ । किन छैन ? सिडि बिक्ने भनेरमात्रै एल्वम बन्दैनन् । युटुवमा हेर्नु, सिआरबिटी र पिआरबिटी जानु पनि बिक्री हो । कसैले डाउनलोड गरेर किन्छ भने त्यो पनि विक्रि हो । जसरी हुन्छ,व्यापार भइराछ । गतबर्षको हेर्ने हो भने सर्वाधिक डिजिटली व्यापार भएको गीत पनि मेरै थियो । नम्बर वान रोयल्टी होल्डर नै मै हुँ ।